हजुरबुबाले सुनाएको यथार्थ कुरा कहिल्यै पत्यार लागेन ! तर पछि थाहा भयो की हजुरबाको कथामा लुकेको थियो ठूलो रहस्य ! – Medianp
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २६, २०७५१४:५३0
एजेन्सी,२६ असोज । डेनमार्ककका क्लव क्रिस्टिन्सन आफु सानो हुँदा उनी सधै हजुरबुबासँग बस्न जान्थे । उनी सधै गर्मी बिदा भएपछि अन्य ठाउँ जान छोडेर भएपनि हजुरबाको कथा सुन्न फार्महाउसमा जाने गर्दथे । उनलाई हजुरबाले सुनाएको कथाहरु नकै मन पथ्र्यो ।
हजुरबाले सधैभरि नयाँ नयाँ कथाहरु सुनाउने गर्दथे । यस्तै एकदिन उनका हजुरबाले दोस्रो विश्व युद्धको कथा सुनाएका थिए ।
तर क्रिस्टिन्सनले उहाँको कथालाई काल्पनिक ठानेका थिए । तर हजुरबाले भनेको कथाकोे यथार्थ उहाँ मरेको कयौँ वर्ष पछि क्लवले थाहा पाए । हजुरबाले भनेका थिए की उनीहरुको फर्माहाउसका दोस्रो विश्वयुद्धको बेला लडाकु विमान विस्फोट भएको थियो । जब हजुरबाले कथा सुनाउँथे त्यतिबेला पनि त्यहाँ युद्ध चलिरहेको थियो । उनी त्यहा हेर्न जान पाएनन् । उनलाई लाग्थ्यो यो पनि हजुरबुबाले बनाउनु भएको काल्पनिक कथा होला ।
एकदिन क्लसका छोरा स्कुलबाट आए । उनले आफुलाई दास्रो विशवयुद्धको प्रोजेक्ट गर्नुपरेको बताए । उनले आफुले दोस्रो विश्वयुद्धको जानकारी जुटाउन पर्ने बताए । क्लसले आफ्नो छोरालाई भने हजुरबुबाको फर्महाउसमा गएर हेरन् उहाँको कथाको विमान भेटिन्छ होला नी ?
उनीहरु हजुरबुबाको कथालाई सम्झिदै फर्महाउस पुगे । त्यहाँ पुगेर विमान खोज्न नकै प्रयास गरे । तर उनीहरुले एक टुक्र पनि भेट्न सकेनन् ।
उनीहरुलाई हजुरबाले भनेको कथाको यथार्थ थाहा पाउननु नै थियो । तयसपछि उनीहरुले मेटल डिटेक्टरको प्रयोग गरे यति गर्दा पनि केही नलागेपछि उनलाई लाग्यो की साच्चै हजुरबाको कथा कथा मात्र थियो । यतिकैमा उनीहरुले प्रयोग गरेको डिटेक्टरले ठूलो आवाज दियो । त्यसपछि दुवै जना मिलेर खन्न थाले । १५ फिट गहिराइमा धातुको टुक्राहरु भेटिन लाग्यो ।
त्यसपछि उनीहरुलाई लाग्यो यो हजुरबाको कथाको विमानको टुक्रा हो । त्यसपछि उनीहरुले विमानको इन्जिन फेला पारे थाहा पाएकी त्यो हजुरबाको कथाको यथार्थ थियो । उक्त विमान दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग गरिरहेका जर्मन सेनाको विमान मेमरमिट थियो । उनीहरुले खनेर नै इतिहासका पानाहरु खोजिरहेका थिए । इन्जिन भेटे लगतै एउटा हात भेटेका थिए । त्यसपछि कपडाहरु गर्दै बाइबल पनि भेटेका थिए ।
उक्त लाश त्यहि विमानका पाइलटको थियो । त्यसपछि उनीहरुले प्रहरीलाई खबर गरे । निकै चिसो ठाउँ भएको कारण त्यहाँ पाइलटको शरिर राम्रै थियो । त्यतिबेलाका पाइलट १९ वािर्षय हेन्स वन्डर लिंच थिए । उनको घर लिथुआनिया हो । त्यसपछि उनको शव घरमा पुर्याइयो र ७० वर्ष पछि पायलटको दाह संस्कार गरिएको थियो ।